काेहलपुरमा नगर प्रमुख रावतकाे घरबाट जनगणना शुरु – Dainikujyaalo
दैनिक उज्यालो । २५ कार्तिक २०७८, बिहीबार मा प्रकाशित
काेहलपुर । नेपालको १२ औं राष्ट्रिय जनगणना देशभर आजबाट शुरु भएकाे छ ।
बाँकेकाे काेहलपुर,बैजनाथका सबै वडामा जनगणना शुरु भएकाे छ। कोहलपुर बैजनाथ स्थानीय जनगणना कार्यालय अन्तर्गत मुख्य जनगणना कार्य बिहिबार काेहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख नलुटबहादुर रावतकाृ घर परिवारबाट तथ्यांक संकलन कार्य सुरु भएको कोहलपुर – बैजनाथ स्थानीय जनगणना कार्यालयका स्थानीय जनगणना अधिकारी रबिलाल मिजारले जानकारी दिए। आज कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ गते सम्म गणकहरू घर-घरमा पुगेर तथ्यांक संकलन गर्नेछन् ।
पहिलो चरणको घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्यमा सूचीकृत भएका तथा छुटेकाहरुलाई समेत समावेश गरी सबै परिवारको व्यक्तिगत विवरण संकलन हुनेछ।
जनगणनाका लागि देशैभर करिब ४० हजार गणक र ८ हजार ५ सय सुपरिवेक्षकहरू परिचालन हुनेछन् भने काेहलपुरमा सुपरिवेक्षक २८ जना र गणक १ सय २३ जना तथा बैजनाथ गाउपालिकामा सुपरिवेक्षक १७ जना र गणक ७३ जना परिचालन भएकाे स्थानीय जनगणना अधिकारी मिजारले बताए।
उनले भने, ‘स्थानीय तहका १२ कक्षा पढेका बेरोजगार युवाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर गणक छानिएको हो । त्यसमा पनि ५० प्रतिशत महिला र ५० प्रतिशत पुरुष खटाइएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणनामा उत्तरदाताले ८० प्रश्नको उत्तर दिनुपर्नेछ । घरदैलोमा पुगेका गणकले सबैभन्दा पहिले परिचयात्मक खण्डबाट प्रश्न सोध्नेछन् । त्यसमा प्रदेश, जिल्ला, गाउँपालिका, वडा, गाउँ, बस्ती, परिवारमूलीको नाम र थर, सम्पर्क नम्बर सोधिनेछ ।
त्यसपछि पारिवारिक खण्डमा परिवारले प्रयोग गर्ने घरको स्वामित्व कस्तो हो ? परिवारले प्रयोग गरेको घरको जग केले बनेको छ ? घरको बाहिरी गाह्रो केले बनेको छ ? घरको छाना केले बनेको छ ? घरको भुईं कस्तो छ लगायत प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने छ । त्यस्तै घरमा मोबाइल, ल्यापटकप, वासिङ मेसिन, एयर कन्डिसन, रेफ्रिजरेटर लगायत उपकरण र सुविधाको उपलब्धताबारे पनि सोधिनेछ ।
यसैगरी मृत्युसम्बन्धी विवरण र अन्य व्यक्तिगत विवरण सोधिनेछ । उत्तरदाताले परिवारका सदस्यको जन्ममितिदेखि नाता सबै खुलाउनुपर्ने छ । परिवारमा खानेपानीको मुख्य स्रोत के हो ? खाना केमा पकाउनुहुन्छ ? केको बत्ति बाल्नुहुन्छ ? परिवारले प्रयोग गर्ने चर्पी कस्तो छ ? आदिजस्ता प्रश्नहरू गणकले सोध्नेछन् ।
शैक्षिक विवरणमा कुन विषय पढेकोसमेत बताउनुपर्नेछ ।
एकजना गणकलाई एउटा परिवारको प्रश्नावली भर्नका लागि औषतमा २० मिनेट समय लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।